DRAE – Faritra Atsinanana: arenina ny fambolena sy ny fiompiana | NewsMada
DRAE – Faritra Atsinanana: arenina ny fambolena sy ny fiompiana
Par RespIT sur 26/10/2020
Mavesatra ny fiantraikan’ny valanaretina Covid-19 sy ny fihibohana amin’ireo tantsaha mpamokatra any amin’ny distrikan’i Toamasina I sy II sy amin’ireo distrika manodidina. Noho ny fikatonana, sarotra ny fivezivezena ka tsy tafavoaka ireo karazam-bokatra, tsy nahazo ny fanofanana ny tantsaha. Manano sarotra ny fahitana zezika amin’ity fotoam-pambolena manaraka ity. Tratran’ny krizy ny fiompiana sy ny jono noho ny fahavitsian’ny mpanangom-bokatra tonga tany an-toerana.
Ho fiaraha-miasa amin’ny fampiroboroboana sy ny fanarenana ny any ambanivohitra, antsoina hifanome tanana amin’ireo tantsaha mpamboly sy mpiompy. Efa nanambara ny hanampiany ireo mpiomby trondro sy omby ny Tahiry fampandrosoana ny any ambanivohitra (FDA). Ny DRAE, faritra Atsinanana, hamatsy fitaovana sy kojakoja ireo mpiompy. Ny DRAE Atsinanana, hizara fitaovana sy kojakoja amin’ireo mpamboly vary sy mpiompy akoho. Eo koa ny Fofifa foibe hanafaingana ny famokarana aorian’izao Coronavirus izao sy hanampy ny fikambanam-behivavy mpanjaitra.
Amin’ny ankapobeny, tetikasa noraisin’ny DRAE Atsinanana ireo fa mitaky ihany koa ny fanampian’ny hery velona rehetra. Asa anarivony maro ny voakasik’izany, miantoka ny fiveloman’ny fianakavina maro, hiatrehana ny fotoam-pahavaratra ho avy. Izao roa volana mialoha ny faran’ny taona izao, ezahina hanatanterahana izany rehetra izany raha tratra.